CrankWheel: uzo usoro ihe omume na ihe nbudata na ihe ngosi ngwa-ngwa nyocha Martech Zone
CrankWheel: uzo usoro ihe omume na ihe nbudata na ihe ngosi ngwa-ngwa nyocha
Tuesday, February 16, 2021 Tuesday, February 16, 2021 Douglas Karr
Mmekọrịta ọ bụla nke achọrọ n’etiti atụmanya nwere ebumnuche ị zụrụ na ikike ndị ahịa gị ga - enyere ha aka ịgbanwe nwere ike belata ohere ịtụgharị. Nke ahụ gụnyere oge ịzaghachi, ọnụọgụ nke clicks, ọtụtụ nha ihu, nọmba ụdị ihe… ihe niile.
Ndị ọkachamara n’ahịa ahụ m maara na ha chọrọ ịbịa n’ihu atụmanya ahụ. Ha maara na ozugbo ha nwere ike ịgwa olile anya ahụ, mata nsogbu ha, ma soro ha gafere azịza ya… o yikarịrị ka ha ga-eme ka ha bụrụ ndị ahịa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ka ahụmịhe ahụ dị egwu. Anyị na-eme ka ha dejupụta ụzọ tozuru etozu, anyị na-arịọ ha ka ha rịọ ozi, anyị hazigharị oge ha ga - eme ya… wee ju anyị anya na ike anyị ga-enweta ruru eru gafere ngalaba ahịa anyị nwere ọnụego ịtụgharị.
CrankWheel ozugbo Demos
Ọ bụrụ na, na otu ubi, ị nwere ike ịgafe ngwa ngwa nke atụmanya maka onye otu na-ere ahịa na-emeghe? Naanị ị rịọrọ nọmba ekwentị ha, ndị otu ndị ahịa ahụ na-etinye ha n'aka… na enweghị nbudata ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ usoro ndị ọzọ… ha nwere ike ịmalite igosipụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị?
CrankWheel ozugbo Demos bụ azịza ya. Ndị isi ahịa gburugburu ụwa na-eji CrankWheel iji kesaa ihuenyo ha ozugbo na atụmanya - enweghị nbudata achọrọ. N'iji ndọtị Chrome ha, ndị ahịa gị nwere ike igosipụta atụmanya gị na igwe ekwentị ha ma ọ bụ desktọọpụ na-erughị 10 sekọnd.
Ọ bụghị naanị nke ahụ, n'ihi na ha na-ekerịta akara ekwentị ha… CrankWheel na-anwa ịchọpụta ma laghachi data dị oke egwu na atụmanya ahụ ka i wee nwee ike ịmalite ịmalite ịghọta ndị ha bụ, ụlọ ọrụ ha, yana ma ha nwere ike tozuo ijebu.
N'oge nzukọ m na-enwe kwa ụbọchị na atụmanya, m na-eji CrankWheel iji chee ọrụ weebụ anyị. Ọ na - enyere m aka igosipụta atụmatụ ngwa ngwa na - etinyeghị mmemme ọ bụla na kọmpụta atụmanya ahụ.
Quentin Roquet, onye isi oche nke Progenda
CrankWheel Atụmatụ na Uru
Ndị ọrụ CrankWheel na-ahụ a 22x abawanye na ọnụ ọgụgụ nke demos ha nwere ike ibido maka Demos ozugbo.
Nweta ndu mkparịta ụka - Inwetakwu ndu na-enye ekele maka ụdị mkparịta ụka zuru oke nke ị nwere ike ịdaba na weebụsaịtị gị ma ọ bụ mkpọsa ozi ịntanetị. Ozugbo gwa ndị ahịa banyere atụmanya ịntanetị na-eche oku, na ihuenyo, na site na ozi ederede.
Ebute ọgaranya - Jiri ozi kọntaktị ndị na-adịkwaghị eme ihe site na ime ka ọ nwee ozi bara uru dịka ọnọdụ, ụlọ ọrụ, njikọ mmekọrịta yana wdg. Mepụta ihe ndekọ CRM zuru ezu ma maratakwu banyere ụzọ gị.
Mmekọrịta - Zaa websaịtị ndị e mepụtara na - eduga n’otu ntabi anya n’enweghị ike ijikọ ọtụtụ ngwa ahịa enyemaka. Mfe tinye a Kpọọ m Ugbu a or Rịọ a ngosi bọtịnụ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ndenye nwere ike ịbanye na CRM gị ma ọ bụ sistemụ ndị ọzọ na-eji otu n'ime njikọta ọtụtụ.
Mepụta A Free CrankWheel ntabi Akaụntụ Akaụntụ
A Walk-Site of CrankWheel Instant Demos
Nke a bụ vidiyo vidiyo nke ihe ngwọta sitere na ahụmịhe onye ọrụ na ahụmịhe na ahụmịhe ndị otu ahịa. Ọ mara ezigbo mma!
Ngosi: Abụ m mmekọ nke CrankWikiri ụkwụ.
Tags: kpọọ ugbu achrome ndọtịkrankwelcrankwheel ozugbo demosCRMGoogle chromeozugbo ngosindu emejerịọ ka ngosidata ererenyocha
Etu esi eji vidiyo maka azụmaahịa azụmaahịa obere azụmaahịa gị